Shiinaha warshad mesh laydiga la tuuro oo la tuuro iyo soo saarayaasha | Jinqu Birta
La tuuro mesh solay mesh
Dukaanka hilibka lagu dubto mesh mesh
Cirifka daboolan ee mesh mesh ayaa ka hortagi kara dhacdooyinka xagashada gacmaha. Mesh mesh la tuuro looma baahna in la dhaqo. Waxay keydisaa kharashka shaqaalaha. Waa doorasho dhaqaale. Waxaa jira saddex nooc: nooca Flat, nooca convex iyo nooca Arc.
Ku habboon karinta hilibka hilibka, kalluunka, haley, cows, khudradda, yaanyada, pizzas iyo raashin badan.
Cuntadaada waxay ku haysaa solayda halka ay iska leedahay oo kuma dhaceyso inta udhaxeysa godadka waxayna u oggolaaneysaa cunto si siman loo dubay waqti kasta!
Abuur casho fasiraad leh oo quruumahaaga uga farxin doonta cunno bisil oo caafimaad leh oo si buuxda u soo gaadhay qiiqa iyo kuleylka kulaylkaaga.
Square mesh mesh
Dhexroor silig ah 0.8mm, 0.85mm, 0.9mm, 0.95mm, 1.4mm
Cabir 220 * 220mm, 225 * 225mm, 240 * 240mm, 250 * 250mm, 270 * 270mm, 280 * 280mm, 300 * 300mm
Mesh shabag mesh
Cabir 155 * 215mm, 167 * 216mm, 170 * 305mm, 170 * 330mm, 170 * 392mm, 180 * 280mm, 198 * 337mm, 200 * 300mm200 * 330mm, 210 * 270mm,
Hawlaheena weligeed ah waa aragtida "tixgelinta suuqa, tixgalinta caadada, tixgelinta sayniska" iyo sidoo kale aragtida ah "tayada aasaasiga ah, aamina 1-da iyo maaraynta horumarsan" ee Warshaddu waxay si toos ah u siisaa Shiinaha Barbecue ahama Steel Crimped Wire Mesh for Japan / Korea, Haddii loo baahdo, ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto boggayaga internetka ama la-tashiga taleefanka, waxaan ku farxi doonaa inaan kuu adeegno
Warshaddu waxay si toos ah u siisaa Shiinaha BBQ, Qalabka Shabakada Qalabka ee Mashiinka Mesh, Hadafkeenu waa inaan u fidino qiime joogto ah macaamiisheena iyo macaamiishooda. Ballanqaadkani wuxuu khuseeyaa wax kasta oo aan qabanno, isagoo noo kaxeynaya inaan si joogto ah u horumarinno una hagaajino xallintayada iyo geeddi-socodka lagu fulinayo baahiyahaaga.
Hore: Wareeg mesh silig wareegsan
Xiga: Mesh grill mesh
La soomi karo
La tuuro Grill Mesh
La tuuro Net solay
Mesh silig la tuuri karo
Korea Mesh la tuuro